INDAWO YOKUPHUHLA IBOOTH 2 UMHLA WOKUKHUTSHWA, NGUBANI KWICAST? IPLOTI, ITRAILER KUNYE NENDLELA YOKUPHELA KWEXESHA LONYAKA ELIDLULILEYO [ECACISIWE] - IINKQUBO ZETV
IBoothing Booth 2 luchungechunge lwewebhu oluthandayo lolutsha lwaseMelika oluza kusasaza kwiNetflix. Vince
Indawo yokwanga 2 luchungechunge oluzayo lwe-comedy lolutsha lwaseMelika oluza kusasaza kwiNetflix.
UVince Marcello uya kuwuqondisa umboniso. Iyakuthatha inkuthazo kwinoveli yaseBeth Reckless 2020 I-Kissing Booth 2: Ukuhamba umgama.
Iya kuba kukulandelelana komdlalo we-2018 iBoothing Booth.
Imovie yaseJapan anime 2013
Unini umhla wokukhutshwa?
IBoothing Booth 2 iphelele usete ukukhulula nge-24 kaJulayi 2020 kwiNetflix.
Ewe, iqhelekile cast iya kubakho ngendlela efanayo:
UJoey King njengoShelly Elle Evans, uMolly Ringwald njengoNksk Flynn, uJacob Elordi njengoNowa Flynn, uJoel Courtney njengoLee Flynn noJoshua Daniel Eady njengoTuppen.
Kwakhona noMegane Young njengoRachel, uFrances Sholto - uDouglas njengoVivian, uCamilla Wolfson njengoMia, Taylor Zakhar Perez njengoMarco, uMichelle Allen njengoHeather, uBianca Bosch njengo-Olivia, uBianca Amato njengoLinda, uNathan Lynn njengoCamero, uMorne Visser njengo Mnu Flynn , Chase Dallas njengoNowa Flynn, uJudd Kripke njengo-Ollie, uCarson White njengoBrad Evans, ngoku uMilan njengoBusker, noMathew Dylan Roberts njengoHarvey.
IBoothing Booth 2 iya kuba yiyo ukusithatha kuhambo Ndikunye no-Elle, ophumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo. Siza kubona uElle ejuggling abafundisi kunye nobomi bakhe bobuqu.
Siza kubona uElle elungiselela ukuya kwikholeji yakhe yamaphupha kunye nomhlobo wakhe osenyongweni uLee kunye nokuzama ukugcina ubudlelwane bakhe obude kunye noNowa.
Ngelixa kwelinye sizakube simbona esondela kufunda naye omtsha uMarco. UNowa naye uya kubonakala esondela kufunda naye uChole.
Olu iya kuba luhambo olunomdla esiza kubona ukuba uElle noNowa baya kulugcina njani ubudlelwane babo ngelixa bevana nezifundiswa zabo.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho zikho trailer ezifumanekayo kulo mboniso. Iitreyila zihlala zifumaneka kwinyanga enye ngaphambi kokukhutshwa komboniso. Ke sinokulindela ukuba i-trailer yehle ngamanye amaxesha kwinyanga ezayo.
Isibuko esimnyama ixesha le-6 ipowusta
Uphele Njani Ixesha Lonyaka Elidlulileyo? [Kucacisiwe]
Ngaphandle kokushiya umva uNowa, uElle akanako ukumkhupha entlokweni yakhe. Kwitheko lakhe lokuzalwa likaLee kunye noLee, uyaphula kwaye amhlangabeze ekubeni angabinakho ukuthatha isigqibo sokuba ngubani amthandayo. Kwaye ukuba akakwazi ukuvuma ubudlelwane bakhe noNowa, akufuneki abe yinxalenye yobomi bakhe kwakhona.
U-Lee ekugqibeleni ubamba ukuba uza kuphendula kwintlungu ka-Elle kwaye uthatha isigqibo sokumnceda afumane uNowa, osele emkile kwisikhululo seenqwelomoya ukuya eHarvard. Emotweni, uElle uxelela uLee malunga neemvakalelo zakhe ngoNowa.
Kwaye kwenzeka ngempumelelo ukuba yayinguNowa owayehleli emotweni kunye naye. Umboniso bhanyabhanya wokuqala uphele uNowa eshiya ikholeji eshiya u-Elle ngasemva.
U-Elle, kwelinye icala, ushiyeke ezibuza ukuba ingaba buya kuhlala buhleli ubudlelwane babo obude.
Ixesha lejack ryan 4
indawo ethuleyo 2 apho kufuneka ubukele
Liza nini ixesha le-7 yomtoli oza kwi-netflix
I-xbox 360 imidlalo engcono
indawo ethuleyo part 2 on demand